izinwele Split - ebhekene nale cishe njalo owesifazane. Le nkinga kungase kuphakame emiphumeleni imvelo (ilanga, amanzi olwandle, umoya, njll). Kodwa ngokuvamile, imbangela nezenzo ezingafanele ukuze azinakekele. Eqokomisa, perming, izinwele Umbala - konke okuyizinto kungaholela imikhawulo okuhlukene. Izinwele ngenxa omile, baqale ukuhlukanisa ngesikhathi amathiphu kanye aphule. Ngaphezu kwalokho ezihlukahlukene izinto eziyingozi ukungena enkabeni izinwele, okuyinto ke singafi futhi bawe. Ukuze ukuxazulula le nkinga, kukhona anti- semikhawulweni yokuhlukanisa, okuyinto moisturize, okondliwa kulo izinto ezidingekayo kanye izinwele ngayo. La mathuluzi zihlanganisa buso izinwele ngezinhloso okuhlukene. Khetha imaskhi edingekayo ingakusiza ezitolo. Futhi, ungenza imaski izinwele ngoba yokuhlukanisa uphela ngokwakho, ekhaya, futhi ngaleyo ndlela wonge kancane.
Hlobo luni izinwele imaski ngoba yokuhlukanisa kube semikhawulweni zingenziwa ekhaya?
imikhawulo Split amakhambi izinwele abantu:
Ukuzifihla esekelwe kefir.
Sebenzisa kanye ngesonto. Ngaphambi ukusetshenziswa kwaso, kungcono ukulala, ageze futhi asule izinwele. Khona-ke isicelo yogurt kuya izinwele kuwo wonke obuphelele. Khona-ke udinga ukubeka cap ekhanda lakho, uyisonge leyo ithawula futhi ulale. Ekuseni, uma uvuka, ugeze izinwele zakho futhi ome nabo ngendlela engokwemvelo. Kefir kunomphumela oluqinisayo, aqede ukoma futhi izinwele ziyaqothuka, abenze aluhlaza.
Ukuzifihla esekelwe uwoyela burdock.
uwoyela Burdock kuyadingeka ngaphambi ukusebenzisa kancane kusifudumeza bese wagcoba ku ekhanda. Khona-ke mpahla izinwele ngoplastiki nekhava ithawula. Ngemva ihora elilodwa ukugeza izinwele ngamanzi ixubene ijusi lemon. Kufanele usebenzise imoto. It Kunconywa semikhawulweni mncane, ababuthakathaka kanye uqhekeko.
Ukulungisa ukuxubana kumelwe isikhuphasha, spoon (isipuni) kalamula spoon (isipuni) samafutha zemifino. Bese wengeza nengxenye ingilazi yamanzi afudumele. I kwaphumela mass isiteleka kuwo wonke obuphelele izinwele futhi isigamu hashaza ihora nge imoto. Isivuvu uyasondla ekhanda futhi kuthuthukisa izinwele isakhiwo, kuvimbela ukulahlekelwa umswakama.
Isivuvu ngoba yokuhlukanisa uphela likagologo futhi linseed uwoyela
Badinga kuphela spoon (ekamelweni lokudlela) futhi inani elifanayo uwoyela vodka linseed. Hlanganisa lezi izithako futhi ingakapheli imizuzu 8-10, basihlikihle ku ekhanda. Ngemva kwalokho ukuvala izinwele nge Cellophane ukugoqa enamanzi nethawula, futhi ngemva isigamu sehora ugeze izinwele zakho nge imoto. Vodka ngcono kwegazi futhi uwoyela linseed inikeza izinwele Vitamin E.
Ukuzifihla horseradish and ukhilimu omuncu.
Hlanganisa spoon (isipuni) ukhilimu, ubuningi efanayo yemifino kanye ogayiwe uwoyela horseradish impande. The Mask okuholela lisetshenziswa izinwele, amboze epulasitikini futhi enamanzi nethawula, qedani. Ngemva 40 imizuzu ukugeza izinwele nge imoto. Horseradish sithuthukisa ukugeleza kwegazi, okubangela izinwele ukuze abe namandla futhi uhlume ngebelo. Ukhilimu omuncu kunomphumela ukuthambisa, futhi usuthisa ama izinwele.
Ukulungisa edingekayo onion vukuza, isipuni samafutha we-oliva sekuqala ukufudumala kanye isipuni uju. Ngemva ukuxuba, imaskhi lisetshenzisiwe izinwele futhi agcinwe imizuzu 50 ke ngamanzi cool futhi imoto. Onion kwenza izimpande izinwele eqinile, uwoyela moisturizes izinwele, nezinyosi yabo aphulukise futhi kuqinise.
Kungashona 2 amapentshisi ukuba abeke phansi, engeza inkomishi ikota ubisi, 6 amathonsi uwoyela oregano. Ngemuva kokufaka isicelo ukumelana isigamu sehora bese ugeze off. Peach uvala izikali uhlukanise kuphelile.
Izinwele imaski ngoba yokuhlukanisa uphela ukupheka akunzima, wena kuphela kudingeka wazi ukuthi iyini asetshenziswa izithako, kanti uma unanoma le nkinga futhi ngenkuthalo ukuzisebenzisa.
Wendlale Haircut: ukusebenza isitayela
Indlela yokusebenzisa i-mousse ye-styling izinwele kahle: incazelo, izici nezincomo
On umbala omnyama izinwele: ngaphambi nangemva izithombe
Army ukugunda izinwele - inketho ephumelelayo for abafana abanesibindi
Indlela ukuqeda zonke iziboya emzimbeni?
Zezinwele for izinwele iDemo kwabesifazane
Ubuhlungu ngokuhlanganyela ehlombe sobunxele. Kuthiwani uma obukhulu ehlombe langakwesokunxele?
Smartphone Haier W970: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Umuntu omuhle uhlonipha abantu. Umuntu okhaliphile uyaqonda lokhu
Kanjani ukuze ujike flash on "iPhone" ngesikhathi kubizwa uhlelo lokusebenza?
Pioneer, Isilawuli Ukucaciswa, izincazelo, izilinganiso kucatsanisa
Cauterization yegazi ku ekhaleni: izinkomba, izinhlobo, ikakhulukazi izinqubo
Kungani futhi kanjani isifuba droops indlela yokuqeda le nkinga?
Zeqhwa utamatisi ebusika - yindlela enhle ukuze alondoloze amavithamini
Vakashela Ice Palace (Pskov). Lapha ufuna ukubuya
Emadolobheni amakhulu ase-Belarus. Inani labantu base-amadolobha e Belarus
"Euroset" Ibalazwe "Ummbila": kanjani. Credit Card "Ummbila": izimo ukuthola, amazinga kanye nokubuyekeza